नेपाली इसाई मण्डलीको ६० औं बार्षिक उत्सव – Bachan Tv
नेपाली इसाई मण्डलीको ६० औं बार्षिक उत्सव
१५/१६ प्रवासबाट आएर वि.स. २०१४ तदनुसार १९५७ साल एक टोली आउछन् । अस्थायी रुपमा भक्तपुरमा बसोवास गरि काठमाडौंस्थित डिल्ली बजारमा शुरु भएको सेवा आज नेपालमा अगावै समुदायको नेतृत्व गरि रहेको मण्डली मध्ये एक नेपाली इसाई मण्डली हो ।
६० वर्ष गाठ हिजो कालोपुलस्थित केन्द्रिय चर्चमा भब्यत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आजसम्म आउँदा यस मण्डलीमा लगभग २० हजार जति विश्वासी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्तै यस २५ जिल्लाहरुमा फैलिएको छ । १२७ वटा शाखा आवद्ध मडण्लीहरु रहेका छन् । उपत्यकामा १६ वटा मण्डलीहरु रहेको छन् । यस्तै छिमेकी देश भारत र अन्य देशमा पनि यस मण्डलीसँग आवद्ध रहेर सेवा भइरहेको छ ।
त्यही १५÷१६ जना मध्ये हालका बरिष्ठ बयोवृद्ध पाष्टर रोर्वट कार्थक पनि हाल सक्रिय रुपमा वचनको सेवकाईमा लागिरहनु भएको छ । ९३ बर्षिय पाष्टर नेपालको इसाई समुदायमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ । सम्भवत ६० वर्षसम्म पास्टरीय सेवकाइ गर्ने एकमात्र पाष्टर हुनुहुन्छ । उहाँका जेष्ठ पुत्र सामुएल कार्थक पनि पूर्णकालिन पाष्टर सेवकाइमा हुनुहुन्छ । संस्थापक मध्ये डा. राजेन्द्र रोंगोंग पनि हाल नेपाली इसाई मण्डली, ललितपुरमा सक्रिय पाष्टरीय भुमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ ।
जस्तैसुकै अवस्थामा येशूको सुसमाचार फैलाउनु हो – Dr. Jamil Nasir
BACHAN TV	May 4, 2020